Iindawo ezintlanu eziNenzuzo kuyo nayiphi iMarike | Martech Zone
Iindawo ezintlanu eziNenzuzo kuyo nayiphi iMarike
NgoLwesibini, Februwari 23, 2010 NgeCawa, ngoMatshi 24, 2013 Isibonelelo uLange
Kubomi bam bangaphambili benkampani, bendisoloko ndimangalisiwe ngumsantsa wonxibelelwano phakathi kwabantu abenza iimveliso, kunye nabantu abazithengisayo nabazithengisayo. Ukuba sisilumko kunye nokusombulula iingxaki ekuhlaleni, bendihlala ndizama ukufumana indlela yokuvala umsantsa phakathi kwabenzi kunye nabathengisi. Ngamanye amaxesha le mizamo ibiphumelela, ngamanye amaxesha ibingaphumeleli. Ukanti apha ekuzameni ukusombulula ukusebenza kwangaphakathi kwamashishini endiwasebenzeleyo, ndiye ndakhubeka kwinto endikholelwa ukuba yinyani yendalo iphela malunga nophawu kunye nophuhliso lwemveliso.
Inyaniso yokuqala, Ukugxilwa kweBrand, icacisiwe Apha.
Inyaniso yesibini, Udidi Indawo, yindlela iinkampani ezikhuphisana ngayo kwindawo yentengiso, kunye nendlela isikhundla kwindawo yentengiso eya kuthi ichaze impumelelo. Oku kulandelayo yingcaciso emfutshane yolu luvo, kunye nemizekelo yesikhundla ngasinye. (Inqaku lombhali: Ndiyakholelwa ukuba isiseko sale nyaniso sivela kwincwadi efundwayo ngexesha lokuphuhla kwam, ke ukuba oku kuvakala kuyinto eqhelekileyo, ukuba nguwe umbhali wencwadi, nceda undazise. ukufumana umthombo wam wokuqala phantse amashumi amabini eminyaka)
IMicrosoft, ekubeni iyinkampani enkulu yamazwe ngamazwe, ikhuphisana naphina. Kuninzi lweemveliso zabo, abanabanini besabelo sentengiso kuphela, kodwa banendawo phantse yonke yentengiso. Nangona kunjalo kwezinye iindawo bakude okwesibini, okwesithathu, okanye okwesine. Kutheni le nto? Nangona impendulo epheleleyo inde kwaye inobuchwephesha, impendulo yenqanaba lomthengi ilula kakhulu: iindidi, hayi iimveliso, zichaza impumelelo kwindawo yentengiso.
Udidi, oluchazwe ngokulula, ukuba umsebenzisi wakho uya kuluhlula njani uluhlu lwemveliso yakho. Ukuba ndikubuzile ukuba loluphi uhlobo lwemveliso yeWindows XP, ungandixelela? Inkqubo yokuSebenza iyakuba loluhlu lwemveliso, kwaye iMicrosoft iya kulilawula ngokucacileyo eli candelo.
Kodwa xa ndikubonisa iZune kwaye ndicela udidi, ungandixelela MP3 Player. UMicrosoft uphulukana ngokucacileyo nolu didi kuApple. Kutheni le nto uMicrosoft ekhetha ukukhuphisana apha, ngelixa iApple ilawula ngokucacileyo? Kulungile, kuyacaca ukuba kukho imali enokwenziwa ibe lilungu lesibini elilungileyo nokuba inani elinye lilikhulu. Ngapha koko kukho izikhundla ezihlanu ezahlukeneyo kudidi olunenzuzo, ukuba uyazi ukuzisebenzisa.
Izikhundla eziHlanu eziNenzuzo
Izikhundla ezihlanu ezinenzuzo kulo naluphi na udidi lweemarike zezi INkokeli yeNtengiso, Umzuzwana, Enye indlela, Ivenkile, kwaye i INkokeli yeCandelo elitsha. Kwisikhundla ngasinye kwezi kunokwenzeka ukwenza imali, kwaye kunokwenzeka ukuba ukhule. Kodwa kuyinto engenakwenzeka ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye ngaphandle koncedo lwangaphandle.
Kumfanekiso ongentla, isikhundla ngasinye sitsaliwe kwindawo yesabelo sentengiso kunye nobungakanani. Njengoko unokuqaphela, ubukhulu bayo buba bincinci ngokukhawuleza. Ke kutheni le nto kusondele ukungakwazi ukuhamba? Kuba xa isikhundla ngasinye sincinci kakhulu kunesiphambi kwaso, utyalomali olufunekayo ukutshintsha izikhundla lukhulu kakhulu kunenzuzo ekutshintsheni.
Ngoku, makhe sijonge indawo nganye nganye, ukubona ukuba indawo nganye yahluke njani. Ukwenza lo msebenzi, singasebenzisa udidi lwecola, kuba liqondwa kakuhle ngabantu abaninzi.
Indawo yokuqala: iNkokeli yeNtengiso
I-Coke, ewe, yinkokeli. Bakuyo yonke indawo, kwaye inzuzo yabo iyimbali. Bangumzekelo ophambili wenkokeli. Kwaye ngenxa yokuba benokhuphiswano olomeleleyo kwiPepsi, abanakuba nasabelo sokwenene sentengiso. Ke olona khetho lwabo lokwenyani kukungena kwiimarike ezintsha. Ngoba? Kuba kubiza kakhulu ukuvula usasazo lwase China kunokukhupha uPepsi eSafeway.
Isikhundla sesibini: Okwesibini
UPepsi sisiBini esomeleleyo. Bakwindawo yonke, kwaye bacingelwa njengenye kuphela indlela eya kwiCoke. Ke zikhula njani? Ukuthatha isabelo kude neCoke kuyabiza kwaye kunzima, kodwa ukungena e-China unyaka omnye emva kwecoke kulula kakhulu kwaye kubiza kakhulu. Bayila ukukhula kodidi lweCoke.
Indawo yesithathu: Enye indlela
Kweminye imimandla yelizwe iRC Cola yenye indlela. Kodwa abakho kuyo yonke indawo, kwaye abanamandla okuthengisa umlilo omkhulu. Ke zikhula njani? Indawo ngokweendawo. Bajolise kumjelo othile apho banokubonwa njengendawo okanye eyahlukileyo kwaye bakhule? Umnyango nomnyango?
Indawo yesine: I-Boutique
UJones soda yiBoutique engagungqiyo. Bathengisa i-cola, kodwa uJones mncinci malunga nekola, kwaye ngakumbi malunga namava e-cola. I-cola iza kuphela kwiibhotile zeglasi ezineswekile emsulwa, imizobo yesiko kwileyibhile, kunye nexabiso eliphezulu. Ngokucacileyo ayisiyiyo ukhuphiswano oluqhelekileyo kwii-majors. Nangona kunjalo banenzuzo, kwaye banabalandeli abanyanisekileyo. Ngoba? Kungenxa yokuba bahambisa ngokungathandabuzekiyo kwiqela elincinci labathengi becola.
Isikhundla sesihlanu: INkokeli yeCandelo elitsha (i-NCL)
Ke ukuba ufuna ukuphazamisa udidi, wenza njani? Ngokwam, ndingabuza ubuchule beemarike ngasemva kweRed Bull. Bakhe ubukhosi obupheleleyo baxelela wonke umntu ukuba babengekho i-cola, kodwa amandla? Ewe iRed Bull ayinakukhuphisana neCoke xa beqala. Kodwa banokuxelela abantu ukuba udidi lwabo, Amandla, lwalungcono. Kwaye ayikukhuphisani noCola? Basebenzise udidi lwabo olutsha ukufikelela kwiishelufa zevenkile i-coke esele iphumelele. Kwaye bayenzile ngaphandle kokukhuphisana neCoke okanye uPepsi entloko.
Kukhulu, ke kutheni le nto ibalulekile?
Umbuzo olungileyo. Impendulo yehla kule: ukuba uyasazi isikhundla sakho, uyazi indlela yokukhuphisana ngenzuzo. Ukuba awazi ukuba umi phi, kunokwenzeka ukuba uthengiselwe ishishini, intengiso, okanye isicwangciso sokukhula esiza kuchitha imali eninzi ukuzama ukukusa kwindawo ongenakuyibamba. Okubaluleke ngakumbi kukuba, xa usazi isikhundla sakho, ungaphuhlisa izicwangciso zeshishini kunye nezentengiso ezizinzisa izikhundla zakho zenzuzo, kwaye uvelise imbuyekezo ephezulu.
tags: uboneleleizikhundla zokuthengisaINkokeli yeCandelo elitshaEnye indlelaIvenkileINkokeli yeNtengisoUmzuzwana
IGrant Lange lelinye lamalungu asekeleyo e Isitudiyo soBungqina, uphawu lokudibanisa kunye nophuhliso lwemveliso. Usebenza neenkampani ezinkulu nezincinci ukwenza uphawu olusebenzayo kunye nophuhliso lwemveliso.
Ukulungelelanisa iDigital kunye neMveli: Izinto ezincinci ziBalulekile
Eyona Itekhnoloji yeNtengiso ibalaseleyo
Feb 23, 2010 ngo-10: 59 AM
Ihlala ilungile ukuphonononga kwaye ndiyayithanda kakhulu intetho-yenziwe kakuhle kwaye kuyacaca ukuba ndiyivenkile
Feb 24, 2010 ngo-1: 54 PM
Enye into enomdla kukuba-kuxhomekeke kwinto umthengi akhangela-unokuba kwiindima ezahlukeneyo. Umzekelo, uJones ngumdlali ophambili kwi-boutique / craft / premium sodas, kodwa ngokucacileyo i-boutique xa ijongwe ngokuchasene necoke.
Yiloo nto eyenza ukuba imisebenzi yethu inike umdla.